राष्ट्रिय लज्जा : चीनले अनुदान दिएको अक्सिजन सिलिन्डर वन मन्त्रीको तस्विर टाँसेर वितरण ! - Nepali in Australia
May 25, 2021 autherLeaveaComment on राष्ट्रिय लज्जा : चीनले अनुदान दिएको अक्सिजन सिलिन्डर वन मन्त्रीको तस्विर टाँसेर वितरण !
जनता कोरोना महामारीले मृत्युवरण गरिरहँदा अनुदानको सिलिन्डरमा समेत आलेले आफ्नो तस्विर छापेर वितरण गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
जुत्ता चो’र्न पुगेकी युवती आफू सिसी क्यामेराको निगरानीमा रहेको थाहा पाएपछि लजाउँदै भागिन् (भिडियो सहित)
Exclusive: विप्लवको ओलीलाई नछोड्ने चेता*वनी ! Rabi Lamichhane भन्छन् थप दु’ख नदिनु होला, पा’प लाग्छ… (भिडियो हेर्नुहोस्)
Breaking: भाइरल प्रहरीको फ’न्दामा चौधरी ग्रुपको नक्कली कार्ड बोक्ने ! सरकारी बाइकमा दादा’गिरी हेर्नुस (भिडियो हेर्नुहोस)
घिसिङले भने- सरकारले मबाट ठुलो अपेक्षा राखेको छ, पुरा गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु
August 11, 2021 auther